Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Miketriketrika ny mpandeha fiaramanidina, miady amin'ireo mpikarakara ny sidina, manandrana miditra ao amin'ny vala
Ny mpandeha an'habakabaka rehetra dia mahalala fa rehefa midina ny fiaramanidina dia tonga ny fotoana hanamafisana ny fehin-kibonao. Mpandeha amin'ny sidina American Airlines avy any Dallas, Texas mankany Charlotte, North Carolina, no nanohitra ity lalàna ity ary nanao zavatra hafa ankoatr'izay.
Tamin'ny tranga fahatezerana an'habakabaka hafahafa dia nipoitra i Charlene Sarieann Harriott ary avy eo amin'ny seza lamosiny mankany amin'ny efitranon'ireo mpanamory fiaramanidina rehefa nadiva hidina ilay fiaramanidina. Nandaka sy nanaikitra ireo mpikarakara ny sidina izay nanandrana nampitony azy izy.
Rehefa 200 metatra fotsiny ny fiaramanidina tao amin'ny habakabaka, dia nitsangana tampoka avy teo amin'ny sezany tao aoriana i Harriott ary nihazakazaka nankeny amin'ny kokpit fa tsy nisy antony.
Tsy niraharaha ny antso rehetra nataon'ny mpikarakara ny sidina handray ny toerany izy, hoy hatrany ilay vehivavy. Nila mpanamory fiaramanidina telo ny fanenjehana sy handresena an'i Harriott, raha nanohitra tamim-pahatezerana ny fikasana hametraka azy indray izy.
Ny FBI, izay nitondra fiampangana heloka bevava tamin'i Harriot, dia nitatitra fa nandaka ny roa tamin'izy ireo tamin'ny sandry sy ny tongony ary ny kibony izy ary nanaikitra iray tamin'ny mpanamory fiaramanidina iray mandra-dra. Noterena hampiasa fantsona sy fatorana zip tamin'ny vodin-tanana sy ny hatotan'ilay vehivavy ny mpiasa mba hisakanana azy.
Rehefa nidina izy, dia nosamborin'ny FBI i Harriott ary notanana am-ponja izy. Niampanga azy ho “nahalala sy ninia” nanakorontana ny sidina izy avy eo.
Notsaboina tao amin'ny tobin'ny orinasa teny amin'ny seranam-piaramanidina ireo ekipazy.